ကိုချစ်ဖေ ၏ မရေးမနေနိူင်ခြင်းများ: February 2010
ကိုချစ်ဖေလည်း မြန်မာနိူင်ငံသား ကျောင်းသားဘ၀ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကို မှီလိုက်
တော့ ဘယ်မပါပဲနေမလဲ ရပ်ကွက်ကလေးမီးလောင်နေတာ ငါတို့အိမ်နဲ့ဝေးတာပဲဆိုပြီး မီးငြိမ်း
တဲ့သူတွေ မီးငြိမ်းဖို့ကြိုးစားသူတွေကို မကူပဲ ကြားနေတယ်တော့ ဘယ်လုပ်နိူင်ပါ့မလဲဗျာ။ အဲ့ဒီ
တော့ပါတာပေါ့ ပါတယ်ဆိုလဲ ထုံးစံအတိုင်းပဲ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးထဲ ရောက်ရင်
ရောက် မရောက်ရင် ထောင်ထဲရောက်ပေါ့ဗျာ ခေတ်မီသူတိုင်း ထောင်ကျကြသည်လို့တောင်
အဲ့ဒီတုန်းက ကိုချစ်ဖေလဲ အများသူငါလို ထောင်(၇)နှစ်ကျသွားပါတယ် အဲ့ဒီတုန်းကမို့ပေါ့ အ
ရေးအခင်း အရှိန်ကြီးကလဲရှိ နယ်စပ်က ကိုယ့်ကျောင်းသားတွေကလဲ တပ်မတော်ကြီးဖွဲ့လို့ အ
မေရိကန်နိူင်ငံကပဲ တိုက်လေယဉ်ပျံတွေပေးမလို့ သင်တန်းပဲတက်နေကြပီလိုလို။ ဆိုတော့ ကို
ချစ်ဖေတို့လဲ သက်သာသပေါ့..ဈေးချိူတာပေါ့ ခုလိုမျိူး ကြံဖွတ်ထဲမ၀င်မိလို့ ဖားလဲမဖားတတ်
တဲ့သူတို့ဖြစ်ပြီး နိူင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့လဲ နီးစပ်သူဖြစ်လို့ဆိုပြီး အုန်းသီးတလုံး ပန်းသီး
နှစ်လုံးဝယ်ပြီးဈေးကအပြန် အမြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ လက်ပစ်ဗုံးနှစ်လုံး မိုင်းတလုံးလက်ဝယ်တွေ့ရှိလို့
ထောင် အနှစ်နှစ်ဆယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ပုဒ်မမျိူးအတတ်မခံရလို့သာပေါ့။
ဒါပေမဲ့လဲ မှီရာပုဒ်မနဲ့(၅)ည ၁၇(၁)ပုဒ်မ နှစ်ခုနဲ့ ထောင်ကျပါတယ် ထောင်ကျတော့လဲကျပေါ့
ပြန်လွတ်တဲ့တနေ့လဲ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ဒီလိုပုဒ်မမျိူးနဲ့ထောင်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာ
ပေါ့ဗျာ ဘာဖြစ်လဲ ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်နေမယ် ဘ၀တူအကျဉ်းသားတွေနဲ့ ထပ်တူ
ကိုယ်ချင်းစာနာမှုနဲ့နေမယ် သူတို့ဘ၀အကြောင်းတွေ မေးမြန်းလေ့လာမယ်ပေါ့ ဘာဖြစ်လို့ဆို
တော့ စာဖတ်ခွင့်မရဖတ်စရာစာအုပ်မရှိတဲ့အပြင် တရားဝင်ထုတ်ဝေထားတဲ့စာအုပ် တအုပ်
အုပ်များ ခိုးဖတ်နေတုန်းမိလို့ကတော့ မူလကိုယ်ကျလာတဲ့ ပြစ်မှုထက်အပြစ်ကြီးတဲ့အမှုလိုဝိုင်း
ရိုက်ပြီး တိုက်ပိတ်ခံရဦးမှာ စာဖတ်ရှု့ခွင့်မရှိ စာအုပ်စာတန်းဆိုတာ အကျဉ်းသားများဖတ်လို့အ
သိပညာတိုးသွားရင် နောင်ပြစ်မှုမကျူးလွန်တော့ဘူး မခိုးတော့ဘူး မတိုက်တော့ဘူးဆိုရင်
ထောင်ကျမဲ့သူတွေမရှိတော့ သူတို့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ပြုတ်သွားနုိူင်တယ်လို့ရယ်များ တွေးမိလို့လားတော့မသိပါဘူးဗျာ။ စာဖတ်ခွင့်မရဘူးပေါ့။
ကိုချစ်ဖေကတော့ မတရားအသင်း ၁၇(၁) သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
ဆက်ကြေးကောက်ခံခြင်း အစည်းအဝေးတက်ခြင်း လူသစ်စုဆောင်းပေးခြင်းတွေ ပြုလုပ်
ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံသဖြင့် (တကယ်ကတော့ ဘာသက်သေမှမရှိ) အ
လုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒါဏ်(၂)နှစ်ချမှတ်လိုက်သည် (တကယ်က တရားသူကြီးကဖတ်ပြတာ စာအိပ်ပိတ်ပြီးသားလာတာ-ဒါကိုခင်ညွန့်တို့ ဥာဏ်ပေါ့) ဆိုတဲ့ပုဒ်မ ပါလို့တဲ့ နိူင်ငံရေးသမားပုဒ်
မ(၅)ညသမားကြီးများနှင့် ရောနှောမထားရဆိုပဲ။ ရောထားရင် ကိုချစ်ဖေတို့လို သူပုန်ကျောရိုး
သမားတွေကို (၅)ည နုိူင်ငံရေးသမားကြီးများက နိူင်ငံရေးအတွေးအခေါ်တွေ တပ်ဆင်ပေး
လိုက်မှာစိုးသတဲ့ ကိုချစ်ဖေတို့လိုသူတွေကလဲ နိူင်ငံရေးသမားကြီးများကို တော်လှန်ရေး လက်
နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးလိုက်မှာ စိုးလို့ဆိုပဲဗျ။
ဒီတော့ကိုချစ်ဖေက မျက်နှာငယ်ပါတယ်ဗျာ ရိုးရိုးရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားများနဲ့ ဒိုးတူဘောင်ဖက်
စားအတူ အိပ်အတူ ရေချိူးအတူ ထမင်းဆွဲအတူ တန်းစီအတူ ပုံစံထိုင် ပုံစံရပ် ပုံစံသွား အလုပ်
လုပ်အတူဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ ဖြစ်လဲဖြစ်ပေါ့ ဒါဒို့ပြည်ပဲ ဒို့နိူင်ငံသားတွေပဲ စစ်အာဏာရှင်ခေတ်
ကြီးရဲ့ လွဲမှားမှုတွေ မတရားမှုတွေကြောင့် ဓါးစာခံဖြစ်လာကြရသူတွေ ငါတို့နဲ့ ဘ၀တူတွေ ရဲ
ဘော်ရဲဖက်တွေလို့ပဲ သဘောထားပါတယ်။ ထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး တန်းစီးလဲမ
လုပ်ပါဘူး ဘုတ်ကိုင်လဲမလုပ်ပါဘူး။ ချင်းခွာချွတ် ရိုက်စားလဲမလုပ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုချစ်ဖေလဲ
သူငယ်ချင်းတွေ မြှောက်ပေးတာနဲ့ ဗိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ် တပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါဖြစ် ဖြစ်
တကယ်တော့ ကိုချစ်ဖေတို့က အဲ့ဒီတုန်းက အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်လူငယ်တွေ တိုင်းပြည်အ
တွက်ဆို “မခင်တွယ် မကြင်တယ် ချစ်သူစွန့်လို့ရယ် တိုက်ပွဲကိုပင်တွေ့အောင်ရှာတော့မယ်”
စိတ်ဓါတ်မျိူးတွေ (စွန့်စရာ ရည်းစားလဲမရှိပါဘူး.) ငါတို့မှ ၀င်မလုပ်ရင် ဒီမိုကရေစီတော့ရ
တော့မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ထားနေချိန်မျိူး ဖတ်စရာစာအုပ်ကလဲ မရှိတော့ သတင်းအဆက်
အသွယ်ကလဲ မရှိ ထောင်ဝင်စာပြန်လာတဲ့သူတွေကိုမေးမေးကြည့်ရ ထမင်းဟင်းထုတ်လာတဲ့
သတင်းစာ ဆီစွန်းလေး အပေလေးက သတင်းကို မှားမှားမှန်မှန်ဖတ်ရ(နာရေးသာရေးသတင်း
ကတော့ မှန်မှာပဲလေ) အခြေအနေ ဒီတော့ ထောင်ကျလာတဲ့ ထောင်ကျသစ်တွေ အချူပ်သစ်
တွေကိုပဲ သတင်းမေးရတာပေါ့ အပြင်လောကမှာ ဘာတွေထူးလဲ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဘာတွေ
ဒီတော့ကာ ကျနော်က နေရင်းနဲ့ စစ်တပ်က ဗိုလ်ကြီး တခါတလေတပ်ကြပ်ကြီး ဖြစ်လာရော
စစ်တပ်က ဖမ်းပို့တဲ့ စစ်ပြေးတွေဆို ရဲဘော်တွေများတယ်လေ သူတို့ကို မြန်မာတပ်မတော်
ကြီးကနေ ဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရတာလဲ ဘာလဲ မပြေးရင်မရဘူးလား ဆိုတာမျိူးကို သိချင်မေး
ချင်ကြတာပေါ့။ ညနေ ၅နာရီ ၆နာရီ လူစစ် အဆောင်တံခါးပိတ်ပြီး တဲ့အချိန်ကနေ ည ၉ နာ
ရီအထိက အကျဉ်းသားတွေရဲ့ အပျော်ဆုံးအချိန် နားချိန် စကားပြောချိန် သီချင်းဆိုချိန် ကိုယ်
ပိုင်အချိန်ပေါ့ အဲ့ဒိအချိန်မှာ သတင်းလဲရ အပျော်သဘောလဲဖြစ် ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေက
ကျနော်ဆီကို တပ်ပြေးမှုနဲ့ ထောင်ကျလာတဲ့ တပ်သား အကြပ် ရဲဘော်တွေကို ကိုချစ်ဖေဆီကို
ခေါ်ခေါ်လာပါတယ် သူတို့က စစ်သက်နဲ့ အခြေအနေကိုမေးပြီးမှ ကျနော့်ဆီကိုခေါ်လာတာပါ။
တပ်သားခပ်ငယ်ငယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေက ကိုချစ်ဖေကို “ ဗိုလ်ကြီး..ဒါ ခလရ (…..) မြန်အောင်က ရဲဘော်……ဘယ်သူပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဆရာကြီး..ဒါ..ခမရ(…….)
ဘယ်လောက်က ဒုတပ်ကြပ် ဘယ်သူပါပေါ့..” ကိုချစ်ဖေက သူတို့ပေးတဲ့ ရာထူးအတိုင်းဆက်
ဟန်ဆောင်ရတယ် တပ်ကြပ်ကြီးလောက် တပ်ကြပ်လောက်ကို မှားခေါ်လာမိရင်တော့ သိပ်
ဟန်ဆောင်လို့မရဘူးလေ ဒါပေမဲ့လဲ ခပ်တည်တည်နဲ့တော့ ဆက်ပြောရတာပဲ ဒါပေမဲ့လဲ တပ်
ရင်းကလွဲနေတော့ယုံတယ် ကိုချစ်ဖေကလဲ အရင်ထဲက ရှုတင်းတင်း မာရေကြောရေနဲ့ ဆံပင်
ကလဲ တိုတိုပဲထားတတ်တော့ ယုံတာပေါ့ဗျာ သင်္ဘောဆိပ်တွေ ကားဂိတ်တွေမှာဆို စိတ်တိုမှ
တိုပဲ ကိုယ့်ကို မြန်မာတပ်မတော်သား တပ်ကြပ်ကြီးတွေနဲ့ လာလာမှားကြတာ ကိုချစ်ဖေ ဥပဓိ
ရုပ်ကလဲ စစ်တပ်က တပ်ကြပ်ကြီးတယောက်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ မှန်းကြည့်ကြပေါ့နော..။ သူ
တို့ကို အင်တာဗျူးချင်တော့ကြားဖူးနားဝနဲ့ မှန်းတုတ်ရတာပေါ့ဗျာ လူသစ်တွေဆိုတော့လဲ ကြောက်ကြတယ်မဟုတ်လား နောက်ကိုယ်ဘာကောင်ဆိုတာလဲ မသိသေးတော့ ဖိန့်လို့ရ
ရဲဘော်လေးတွေဆို ကိုယ်က “ ကဲ..ပြောပါဦးကွာ..ဘာဖြစ်လို့ မင်းတို့က ဒို့တပ်မတော်က ထွက်ပြေးရတာလဲ” လို့မေးရင် သူက “ဗိုလ်ကြီးရယ်ကျနော်တို့လဲ အစထဲက တပ်ထဲလိုက်ချင်
လို့မဟုတ်ပါဘူး ရွာကိုခွင့်ပြန်လာတဲ့ကောင်က ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ၀င်မိတာပါ နောက်တော့
ဗိုလ်ကြီးတို့သိတဲ့အတိုင်း ပြန်ထွက်လို့လဲမရတော့ ထွက်ပြေးပြီးထောင်ကျခံလိုက်တာပါ ဗိုလ်
ကြီးရယ်” တဲ့ ကိုယ်က ဒါဆိုသိပြီ သူဘယ်တပ်ကလဲ ကိုယ်က ဘယ်တပ် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်
က ဘယ်လောက် အပါတ်စဉ်ဘယ်လောက်က ဆင်းလာတာ မင်းတို့တပ်က ဗိုလ်ကြီးဘယ်သူ
(အမှန်ရှေ့ကမေးပြီးသား အသေမှတ်ထားရတာ) နဲ့ငါနဲ့ အပါတ်စဉ်တခုထဲ အရမ်းခင်တာ ဒါဆို
သူကပြောပြီ “(ဟာ…ဟုတ်လားဗိုလ်ကြီး ခုဗိုလ်ကြီးဘယ်သူက ဘယ်ကိုပြောင်းသွားပြီး ကျ
နော့်တို့ တပ်ခွဲမှုးဗိုလ်ကြီးက ဘယ်သူလေ” ဆို ကိုယ်က “အော.ဟုတ်လား ဒီလူနဲ့က ကိုယ်က
အပါတ်စဉ်တပါတ်စောမယ် သူက ဂျူနီယာ” လေဆို တပ်ထဲက သိချင်တာတွေ မေးလို့ရပြီ။
ကိုယ်က ရှေ့ကနေ “ ဒို့တပ်မတော်ကြီးလဲ အရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာ ရဲဘော်ရဲဖက်စိတ်
ရယ် မရှိကြတော့ဘူး အထက်ဖားအောက်ဖိပဲ ဖားနိုင်မှ ရာထူးတက်တာ ငါတို့ကလဲ ဖားတာဆို
သိပ်အမြင်ကပ်တာ” ဆိုသူက တော်တော်ပြောရဲသွားပြီ “ ဟာ..ဟုတ်တယ်ဗိုလ်ကြီး ဘယ်လို
ဖြစ်နေတာဆိုပြီး ပြောတော့တာပဲ ကိုချစ်ဖေတို့ အရပ်သားတွေက သိချင်လို့အောက်ကျခံမေး
ရင်မပြောချင်ကြဘူးဗျ နောက် တိုက်ပွဲအကြောင်းတွေမေးရင် ပိုဆိုးသေး အပိုတွေပါထည့်ပြော
တော့တာလေ။ ဒီတော့ ကိုချစ်ဖေတို့လဲ အကြံအဖန်လုပ်ပြီးမေးရတာပေါ့ဗျာ။ နယ်စပ်မှာ
ကျောင်းသားတွေနဲ့ တိုက်တုန်းက ကိုယ်က ဘယ်လိုခံခဲ့လို့ ပြေးခဲ့ရတာဆိုရင် သူကလဲ အား
ကြမခံ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လိုခံရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပါလေရော။
တပ်ကပြေးတယ်ဆိုမှတော့ မကြိုက်လို့ပေါ့ တပ်မကောင်းကြောင်းကို နည်းနည်းပြောတယ်ဆို
ထဲက သူကပြောရဲသွားပြီ ကျနော်တို့ ရဲဘော်တွေဘ၀က ဘယ်လို အရာရှိတောင်မှ တပ်ရေး
ဗိုလ်ကြီးက ဘယ်လို သက်သာကိုင်တဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးက ဘယ်လို ရှေ့တန်းမလိုက်ချင်ရင် လိုင်း
ကြေးက ဘယ်ပုံ ပြောပြီ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်သိချင်တာတွေ မေးလို့ရပြီ “မင်းတို့တပ်က ခုကရင်
ပြည်နယ်ကို ပြန်ထိုးနေတာလား” ဆို “မဟုတ်ဘူးလေဗိုလ်ကြီး ကချင်မှာပဲ” ဆို ကိုယ်ကမှတ်
ထားပေါ့ စိတ်ထဲက အလွတ်ကျက်ထားပေါ့ နောက်ပြန်ရွှီးပေါ့။
ကိုချစ်ဖေက ကိုယ်ချစ်ဖေတို့နဲ့ ရွယ်တူ တပ်ကြပ်ကြီးတယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ကို အလွတ်
ကျက်ထားသေးတယ် ကိုယ့်ကိုစစ်ကြောရေးလုပ်တုန်းက ဗိုလ်ကြီးရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်နဲ့ အပါတ်
စဉ်ကိုလဲ သိထားသေးတော့ မယုံသင်္ကာဖြစ်နေရင် ကိုယ်အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံ
ပါတ်ကို ဒေါက်ဒေါက်ဒေါက်နဲ့ ရွတ်ပြလိုက်ရင် တအားကိုယုံသွားတော့တာပဲဗျ ကိုယ်စုထားတဲ့
ရှေ့က အင်တာဗျူးထားတဲ့ အကြောင်းတွေ အဖြစ်တွေကလဲ အထောက်အကူပြုသပေါ့ဗျာ။
ကိုချစ်ဖေက မဆလခေတ်ကနေ ခုအချိန်ထိ သေနတ်ဆို လေသေနတ်က လွဲလို့ ဘာသေနတ်
မှ မပစ်ဘူးပါဘူးဗျာ သေနတ်ပြောင်းကြီး ကိုယ့်ဖက်လှည့်လာရင်တောင် မတော်တဆပေါက်
သွားရင် ဆိုတာမျိူးတွေးမိနေတာ။ သူတို့နဲ့တွေ့တော့မှလဲ ကိုချစ်ဖေလဲ နေရင်းထိုင်ရင်းရာထူး
တွေတိုးတော့တာပဲဗျာ.အဲ့ဒီတုန်းက ၁၉၈၉-၉၄ ကာလဆိုတော့ ခုချိန်ဆို ကိုချစ်ဖေလဲ စစ်
သက်တွေတော်တော်ရနေပြီ။ ကိုချစ်ဖေ အင်တာဗျူးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်လေးတွေ အကြပ်တွေက
တော့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို သေသေချာချာသိသွားကြ
တယ်ဗျ။ ရဲဘက်စခန်းတွေမှာ မသေခဲ့ရင်တော့ အိမ်တော့ပြန်ရောက်ကြမယ် ထင်ရတာပဲဗျာ။
တကယ်တော့ ကိုချစ်ဖေလဲ အပြစ်မရှိ သူတို့လဲ မရှိ ခေတ်ကြီးကကို သွေးဆိုးနေတာ မူးယစ်
ရမ်းကားနေတာ သေနတ်ထောင်ဖေါက် မိုက်ကြေးခွဲနေတာ လူတစုက လူအများကြီးကို ဗိုလ်
(ချူပ်)ကြနေတာ လူအများကြီးဆင်းရဲတွင်းနက် စားဝတ်နေရေးအတွက် ပူပန်နေရချိန်မှာ ဗိုလ်
ကြနေတဲ့ လူတစုကစိတ်ထင်တိုင်း သုံးဖြုံးနေနိူင်တာ။ အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးမှာ ကိုယ်က ဗိုလ်
ကြအနိုင်ကျင့်သူတွေဘက် နေမလား ဗိုလ်ကြအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူတွေဘက်ကနေမလား စဉ်း
စားဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ် မစဉ်းစားကြသေးရင်လဲနေပါ ရပ်ကွက်လေး ရွာလေးကတော့
မီးတော်တော်လောင်နေပါပြီး ကိုယ့်အိမ်လေးမီးမလောင်သေးဘူး တော့မထင်ပါနဲ့ မီးကလောင်
လာတော့မှာပါ ဟိုလူကြီး ကိုခင်ညွန့်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းတောင် မီးလောင်သွားသေးတာပဲ မ
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 5:59 PM , Links to this post , 11 comments
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 9:51 PM , Links to this post ,7comments
တုံးအောက်ကဖား ပြားတဲ့ဖားကပြား ဖေါင်းတဲ့ဖားကဖေါင်းခဲ့တယ်
(သူ့မှာ နာမည်တွေ အများကြီးရှိတယ်တဲ့).
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဘ၀ကကော ဘာဖြစ်လို့
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 10:29 PM , Links to this post ,6comments
သစ်ချင်သလိုသာသစ်တော့ဗျာ မျက်နှာတောင် ခဏခဏ သစ်ရသေးတာပဲ..
ကျနော်ကတော့ ခင်ဗျားနဲ့ ဒေသတူမွေးဖွားခဲ့လေတော့
ကမ္ဘာကြီးလည်ဖို့ မကျေနပ်စရာတွေနဲ့ မီးထိုးခဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး..
ဒီတနွေလဲ ကျနော်ချစ်ချင်ရာရာတွေ ချစ်ဦးမယ်ဗျာ
ဒါပေမဲ့လဲ.. ပန်းဆိုးတန်းက အစိုးရဘီအီးဆိုင်လေးမှာ
အခုတော့ အရက်တွေလဲ မစစ်တော့ဘူး
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဗာလင်တိုင်း ဒေး နေ့မှာ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါတယ်ဗျာ..
တမင်တကာ မပါအောင်ရေးခဲ့ရတယ် ဆိုတာ
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 2:01 AM , Links to this post , 10 comments
သားတို့ဘ၀တွေ ဆီမီးလိုထွန်းပြီးပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ ။
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 1:25 PM , Links to this post ,5comments
ကိုယ့်ဘလော့ရပ်ကွက်လေးထဲမှာ ကိုယ့်အစုလေးနဲ့ကိုယ် ကိုယ်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ကို ပျော်
ပျော်ပါးပါး ဟိုအိမ်ဒီအိမ် ၀င်ထွက်စားသောက်စကားစမြည်ပြော နောက်ကြပြောင်ကြနဲ့ပေါ့ ဘ
လော့ဆိုတာကလဲ လုပ်တတ်လို့ကိုယ့်ဘာသာလုပ် မလုပ်တတ်တဲ့သူကိုလဲ လုပ်တတ်တဲ့သူက
လုပ်ပေး ပြီးတော့ သူ့ခံစားချက်လေးကိုယ်ဖတ် ကိုယ့်ခံစားချက်လေးသူဖတ် ဗဟုသုတလဲရ
ပျော်စရာလဲကောင်း အားလုံးလဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အဲ.ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါလဲဖြစ်ပေါ့ဗျာ ဒါမှလဲလူ
ပီသတော့မှာပေါ့ ဗမာပီသတော့မှာပေါ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်အားတဲ့အချိန်လေး စာရေးနိုင်
တဲ့အခါရေး မရေးနိုင်တဲ့အခါ ၀င်ဖတ်ပေါ့။
တချို့ကလဲ မကြိုက်ဘူးပေါ့ ဘလော့ဆိုတာ ရေးချင်ရာတွေ ရေးထားတာတဲ့ အချိန်ကုန်ပြီးသွား
မဖတ်ဖြစ်ပါဘူးတဲ့ ဒါလဲဟုတ်တာပဲ သူကမှ ဘလော့ရွာလေးထဲ မရောက်ဖြစ်တဲ့ဟာပဲလို့ တွေး
လို့ရသေး ဒါပေမဲ့ဗျာ.တနေ့တော့ ကိုချစ်ဖေလဲ ရပ်ကွက်ထဲက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ လက်
ဖက်ရည်လေးသောက် ဆေးလိပ်လေးဖွါ စာအကြောင်းပေအကြောင်း နိုင်ငံတော်ဂျီးတိုးတက်
ပြီးဖွံ့ဖြိုးတဲ့အကြောင်း မီးပွိုင့်တွေ မီးလာတာသတင်း ဖြစ်နေကြောင်း ဘာကြောင်းညာကြောင်း
အဲ့ဒီလိုတွေပြောနေတုန်း ဖြုန်းဆို ရပ်ကွက်ထဲကိုလူတယောက်ဝင်လာသဗျ.သူကမျက်နှာသေ
ကြီးနဲ့ပဲ ဘယ်သူတွေနဲ့လဲဘာမှမပြောဘူးဗျ။ ဂရုလဲသိပ်မစိုက်ဘူးဆိုတာမျိူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့သူက
စကားသာမပြောတာဗျ သူဝတ်လာတဲ့ တီရှပ်ပေါ်မှာ ကျနော့်နာမည် “ အသစ် ပါတဲ့ ကျနော်လဲ
ဘလော့ရပ်ကွက်ထဲမှာပဲနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ကျနော့်ကို စိတ်မ၀င်စားလို့ ဒါမှမဟုတ်လို့ မသိကြလို့ သိရအောင်ခုရပ်ကွက်ထဲကိုဝင်လာတာပါတယ်။ အုန်းအုန်းကျွက်ကျွက်ဖြစ်တော့လဲ
ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီလူက မပြီးသေးဘူးဗျ ကိုချစ်ဖေတို့နဲ့ အခြားသူတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် လူအ
ခွင့်ရေး စာပေ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်တို့ ဘာတို့လဲ တခါတလေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆွေးနွေး
ကြသေးတော့ သူကလဲ သူ့သရုပ်ဖေါ်သဘောနဲ့ ကိုချစ်ဖေတို့ အားလုံးကြားမှာ သူလဲလွတ်လပ်
စွာ ရေးပိုင်ခွင့် ပြပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့သဘောထားလဲရှိပုံရတယ်ဗျ။
ဒီလူအကြောင်းကိုပြောရတာကိုက တကယ်တော့ စကားဝိုင်းပျက်တယ်ဗျ ဒါပေမဲ့လဲ အားလုံး
သိထားရတော့လဲ သိရတာပေါ့ဗျာဆိုပြီး ကိုချစ်ဖေလဲပြောတာပါ ပူညံ့ပူညံ့လုပ်တယ်လဲမထင်ပါ
နဲ့ဗျာ။ အဲ့ဒီလူက ကျနော်တို့ ထိုင်နေတဲ့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းလေးလဲကျော်ရော သူ့ တီရှပ်ကျော
မှာ သူရေးချင်လို့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုဖတ်မိသွားတယ်ဗျ။ တကယ်ဆို ကျနော်တို့ကလဲ မ
ကြည့်ပဲနေရမှာဗျ။ သူငယ်ချင်းတွေက ကိုချစ်ဖေကိုပြတော့ ကိုချစ်ဖေလဲတော်တော် စိတ်ဆိုး
သွားတယ် (ကိုချစ်ဖေကလဲ အစထဲက ၀ူးဝူး ၀ူးဝူး ရှုးရှုးရှဲရှဲ လူကိုး) ဒီလူကိုလဲ နောက်ကနေ
လိုက်သွားပြီး ရိုက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ (ဟိုတလောက ဟိုကောင် ငဦးကို ဒေါပွသလိုပေါ့) ကို
သူ့ကျောမှာရေးထားတဲ့စာကော အဲ့ဒီစာကိုရေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့သူတွေကောတွေ့ရတာနဲ့ ကိုချစ်
ဖေလဲ အော်ဆဲမိသွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ စိတ်လျှော့ခိုင်းတာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါ..အဲဒါ
ဒီလူ့ကျောမှာ ဘာတွေရေးထားသလဲဆိုတာကတော့ အချိန်ပိုတဲ့အခါ ကျနော့်လိုဒေါသ ရသ
ကိုခံစားချင်တဲ့အခါ သူ့ကျောကုန်းကို သွားဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ နာမည်အမျိူးမျိူးနဲ့ သူတို့ အ
ကျနော်ကတော့ ဒီလိုဆဲရတာတောင် အားမရသေးဘူးဗျာ ဒီကောင်တွေကို ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံး
ဖြတ်ကြပါတော့။ ပြောချင်တာတော့ဗျာ အချိန်ပိုမှ အားနေမှ ကျနော့်လို ဒေါသရသကို ခံစား
ချင်တော့မှပဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါလို့။ သူတို့ကတော့ဝမ်းသာနေဦးမယ် ငါတို့ကို ရပ်ကွက်ထဲကအ
သိအမှတ်ပြုသားပဲ ဆိုပြီး။ သူတီရှပ်ပေါ်မှာရေးပြီးရွာရိုးကိုးပေါက်လျှောက်နေတဲ့သူကို ခင်ဗျား
တို့သိထားတော့ ခင်ဗျားတို့သဘောပေါ့ဗျာ။ ကျနော်ကတော့ ထပ်ဆဲချင်သေး
http://exitpoetry.blogspot.com/ (ကဗျာဆရာ မြေမှုန်လွင်ဆိုတဲ့သူရေးတဲ့ သဘောပေါက်
တဲ့အခါရီဝေမှုတွေနဲ့ မျှော်နေမှာပေါ့) ဆိုတာ ဒီကောင်ကျောပေါ်က စာဗျ။ ခုလဲသူငယ်ချင်းတွေ
မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမတွေလား အဲ့လိုမဆုံးမတာကိုက အသစ်ပဲလား ခက်တာက သူ့တို့မိဘတွေ နှမ
တွေလဲ သူ့လိုပဲလားမှ မသိတာ။
Posted by ကိုချစ်ဖေ at 6:07 AM , Links to this post , 11 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၇၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ဘုရားဌာပနာပိတ် - စေတီရုပ်ပွားတော်တွေ၊ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဓာတ်တော်မွေတော်တွေ လှူဒါန်း ဇွန်လ ၁၉ ရက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၇၃ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ နေပြည်တော်က ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး စေတ...
K ငြိမ်းချမ်း ● ကဗျာဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း - K ငြိမ်းချမ်း ● ကဗျာဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ENVOY ဂျာနယ်မှာ အမှုဆောင် အယ်ဒီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ် ကဗျာဆရာ၊ ...